Yangu iPhone Inoti Hapana Sevhisi. Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa! - Iphone
sei usina iphone yangu rega ndibatidze wifi
waya kana chishongedzo hachina kuzivikanwa iphone
hapana kurira pane iphone 5
Kana yako iPhone ikati 'Hapana Sevhisi', haugone kufona kana kugamuchira nhare, kutumira mameseji, kana kubatanidza kune internet kunze kwekunge uri kushandisa Wi-Fi. Zviri nyore kukanganwa kusanganiswa kwePhones edu ave muhupenyu hwedu - kudzamara asashande. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone ichiti Hapana Sevhisi uye kukuratidza chaizvo nzira yekugadzirisa dambudziko .
Nei yangu iPhone Ikuti Hapana Sevhisi?
Yako iPhone inogona kunge ichiti Hapana Sevhisi nekuda kwedambudziko re software, dambudziko rehardware, kana nyaya ine hurongwa hwako hwefoni. Nehurombo, hapana-saizi-inokwana-mhinduro yese padambudziko iri, saka ini ndichafamba iwe nhanho-nhanho-nhanho kuburikidza nematanho ekutambudza andakawana achibudirira pandakashanda kuApple.
Kana iwe uri pamusoro pegomo, iwe Chivabvu shuwa kudzokera kunharaunda usati waenderera. Kana usiri, ngatimbomisai yako iPhone kuti isataure kuti Hapana Sevhisi yezvakanaka.
iphone 5s haina kurira
1. Tarisa mukati Nemutakuri Wako Nezve Akaundi Yako
Vatakuri vanodzima makasitoma maakaundi kune ese marudzi ezvikonzero. Ini ndanzwa nezve zviitiko apo maPhones akabviswa nekuti mutakuri akafungidzira hunyengeri, kubhadhara kwemutengi kwakanonoka, uye nezve vakaroora vasina kugadzikana chaizvo vaisada kunzwa kubva kuna ex wavo.
Kana chimwe chezvikonzero ichi chikaenderana newe, ipa wekutakura runhare, kungoona kuti zvese zvakanaka. Yako iPhone ichati Hakuna Basa kana akaundi yako ikadzimwa, uye ichi chiri chakajairika, asi chiri nyore-kukanganwa chikonzero cheichi chinetso.
Kana iwe ukawana dambudziko reNo Service ndizvo kukonzerwa nemutakuri wako, tarisa yangu nhare mbozha chirongwa chekuenzanisa kudzidza kuti ungachengeta sei mazana emadhora pagore nekuchinjisa zvinhu kumusoro. Kana isiri mhosva yemutakuri wako (uye kazhinji nguva dambudziko iri risiri), inguva yekutarisa software yako ye iPhone.
2. Gadziridza Yako iPhone's Software uye Ekutakura Zvirongwa
Zvakawanda dzePhones dzevanhu dzakati Hapana Sevhisi mushure mekunge Apple yaburitsa iOS 8. Kunyange hazvo dambudziko iri ragadziriswa kubva kare, zvigadziriso zveIOS zvinogara zviine zvigadzikiso zvezvishoma-zvakajairika software zviputi zvinogona kukonzera dambudziko reNo Service. Unogona kuenderera neimwe yenzira mbiri:
Kana iwe uchigona kubatanidza kune Wi-Fi , unogona kutarisa kana software yekugadzirisa ye iPhone yako inowanikwa nekuenda ku Zvirongwa -> General -> Software Kwidziridzo .
Kana iyo iOS yekuvandudza isingawanikwe, enda ku Zvirongwa -> General -> About kutarisa a marongero ekutakura anovandudza . Iko hakuna bhatani rekutarisa izvi zvekuvandudza - ingogara paPeji peji kwemasekondi gumi kana zvakadaro, uye kana pasina chinhu chinobuda, marongero ako anotakura aripo.
Kana iwe usina mukana weWi-Fi , batanidza yako iPhone kune komputa yako uye shandisa iTunes kana Tsvaga (chete paMacs inomhanya Catalina 10.15 kana nyowani) kutarisa kana software yekuvandudza iripo kune yako iPhone. Iwe unozongobvunza wega kana uchida kugadzirisa yako iPhone kana imwe iripo. iTunes uye Finder inotarisawo maratidziro eanotakura otomatiki, saka kana ikabvunza, izano rakanaka rekugadzirisa izvo zvakare.
Kana yako iPhone ikati Hapana Sevhisi mushure mekunge wagadzirisa software yako, kana kana software yako yatove yazvino, inguva yekupinda mukati uye kuita mamwe matambudziko.
Kudzoreredza yako iPhone's network marongero kune fekitori zvisirizvo zvinogona kugadzirisa ese marudzi maseru uye Wi-Fi zvine chekuita nematambudziko pane yako iPhone. Izvi 'zvinokanganwa' ako ese maWi-Fi network, saka uchafanirwa kubatanidzazve kwavari uyezve kuisa maWi-Fi password. Dambudziko reNo Service rinogona kunyangarika mushure mekuti iPhone yako itangezve.
kutsiva yakaputsika iphone 6 skrini
Kuti Reset Network Zvirongwa, vhura Zvirongwa -> General -> Seta -> Gadziridza Network Zvirongwa . Pinda yako iPhone passcode, wobva wadzvanya Dzorerazve Network Zvirongwa apo pop-up yekusimbisa inoonekwa padhuze nepazasi pekuratidzwa kwe iPhone yako.
4. Ongorora Cellular Settings On Your iPhone
Pane akati wandei maseru emadhigiramu pane yako iPhone, uye kana chimwe chinhu chisina kumisikidzwa nenzira kwayo, yako iPhone inogona kuti Hapana sevhisi Zvirongwa zvinogona kushandurwa netsaona, uye dzimwe nguva dambudziko rinogona kugadziriswa nekungodzima seti uye kudzoka.
Dambudziko rekuona maseru maseru pane yako iPhone ndeekuti izvo zvaunoona muZvirongwa -> Maseru anosiyana kubva kumutakuri kuenda kumutakuri. Kana iwe usingaone mamiriro andinotaura muchikamu chino, enda kune inotevera zano - hapana chauri kupotsa. Heano mazano angu:
Enda ku Zvirongwa -> Cellular , Uye ita chokwadi Cellular Dhata iri pamusoro. Kana iri, edza kuidzima uye kudzoka zvakare.
Enda kuCellular Dhata Sarudzo -> Kutenderera uye ita chokwadi Kutenderera Inzwi yakavhurwa. Kutenderera Inzwi kunofanirwa kuve kune vanhu vazhinji muUnited States . Vatakuri havabhadharise mafoni ekufamba-famba sezvavaimboita. Kana iwe uchifarira, mumwe wevanyori vedu akanyora chinyorwa chinotsanangura kuti sei izwi uye data roaching rinoshanda pane yako iPhone . Izwi renyevero : Ipfungwa yakanaka kudzima Kutenderera neZwi kana uchifamba kune dzimwe nyika kunzvenga a yakakura runhare kana wasvika kumba.
Enda ku Zvirongwa -> Vatakuri uye bvisa otomatiki kusarudza mutakuri. IPhone yako inogona kumira ichiti Hapana Sevhisi kana iwe ukasarudza nemaoko maseru network kuti ubatanidze. Vaverengi vazhinji handidi ona iyi sarudzo paPhones avo, uye zvakajairika. Izvo zvinongoshanda kune vamwe vatakuri.
5.Buritsa SIM Card Yako
SIM kadhi yako ye iPhone inobatanidza yako iPhone kune yako yenhare yenharembozha. Ndiwo maratidziro anoita mutakuri wako iPhone yako kubva kune vamwe vese. Dzimwe nguva, yako iPhone inomira ichiti Hapana Sevhisi nekungobvisa yako SIM kadhi kubva ku iPhone yako uye kuidzosera mukati zvakare.
Kana iwe usina chokwadi chekubvisa yako SIM kadhi, verenga nhanho 1-3 yechinyorwa changu nezve nei maPhones dzimwe nguva achiti 'Hapana SIM.' Kuti ubvise yako SIM kadhi, unogona kutora kukuvara kwemvura kunogona kusingaonekwe uye kunonyengera. Kana yako iPhone yatanga kuti 'Hapana Sevhisi' mushure mekunge yatota, pane mukana wakanaka wekuti kukuvara kwemvura kuri kukonzera dambudziko.
Apple haigadzirise iPhones dzakakuvara nemvura - dzinozvitsiva. Kana iwe uine AppleCare +, mutengo wekutsiva wakakanganisika iPhone hauna basa kana uchienzaniswa nezvinodiwa kana ukasadaro. Kana iwe uchitsvaga imwe-isingadhuri nzira, tarisa iyo Kugadzirisa Sarudzo chikamu pazasi.
sei wont foni yangu regai ndiwedzere kune ios 10
7. Dzosera Kumusoro Uye Dzosera iPhone Yako, Asi Verenga Iyo Yambiro Kutanga!
Software huori hunogona kukonzera zvese kubva kunyanyisa bhatiri kupera ku iPhones iri kupisa zvakanyanya kumatambudziko akaita seiri. Ita shuwa iwe tsigira yako iPhone ku iTunes kana iCloud kana ukasarudza kuenderera, nekuti kudzoreredza yako iPhone inodzima zvese pamusoro payo.
An Zvakanyanya Yambiro Yakakosha
Kudzorera yako iPhone kana isingakwanise kubatanidza kune cellular network iri zvine ngozi zvikuru , Neichi chikonzero: An iPhone has kuti ishandiswe isati yashandiswa mushure mekudzoreredzwa. Kana iwe ukadzorera yako iPhone uye ichiri kuti Hapana Sevhisi, ichave zvachose isingabatika. Iwe haugone kuita chero chinhu: kwete kudzorera yako iPhone, usashandise maapplication ako hapana.
Kana iwe uine backup foni iripo uye iwe uri kuda kutora iyo njodzi, kudzorera yako iPhone unokwanisa gadzirisa iyi nyaya, asi hapana vimbiso. Ini handikurudzire iwe edza kudzorera yako iPhone kunze kwekunge uine Apple Chitoro padyo.
8. Bata Mutakuri Wako Kana Gadzirisa Yako iPhone
Dzimwe nguva vatakuri vane yakasarudzika activation makodhi anogona kugadzirisa dambudziko kana yako iPhone ikati Hapana Service. Aya macode anochinja kazhinji uye kune vatakuri vakawandisa kunyora mazita chaiwo pano, asi pane mukana uyo anotakura wako angangokwanisa kukubatsira parunhare. Kana izvo zvikasashanda, mutakuri wako anozokutumira kuApple Chitoro kuti yako iPhone ionekwe nenyanzvi.
Kana iwe ukasarudza kuenda kuApple Chitoro, ipfungwa yakanaka chaizvo yekufonera kumberi kana kuenda online kuita musangano kuGenius Bar usati wasvika. Iwe unogona kupedzisira wamira wakakomberedza kwechinguva (kana kutenga Mac nyowani) kana usinga.
Kana iwe uchida kuchengetedza imwe mari, Pulse tichasangana newe kunzvimbo yaunosarudza, gadzirisa foni yako nhasi, uye vimbise basa ravo rehupenyu.
Matipi Uye Imwe Mhinduro
Imwe yemhedzisiro huru kana yako iPhone ikati Hapana Sevhisi ndeyekuti bhatiri rayo rinotanga kufa nekukurumidza. Kana izvo zviri kuitika kwauri (kana kana iwe uchida kuwana zviri nani hupenyu hwebhatiri zvakajairika), chinyorwa changu nezve sei kuchengetedza iPhone bhatiri hupenyu inogona kuita musiyano.
Kana ino isiri nguva yekutanga kuti umhanye nenyaya yeNo Service uye iwe wakadyiswa, tarisa UpPhone's mamota anotakura ekufukidza kana kushandisa yangu nhare mbozha chirongwa chekuenzanisa kudzidza kuti imarii ingachengetwe nemhuri yako nekuchinjira kune mumwe anotakura.
Hapana Sevhisi? Hapachina.
Makore makumi maviri apfuura, kunyunyuta nezvekusagona kwedu kufona kubva kwese kwatinenge kuchionekwa se 'dambudziko reumbozha', asi zvinhu zvachinja, uye kugona kwedu kugara takabatana kwakakosha zvakanyanya kuhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Muchikamu chino, iwe wakadzidza kuti nei yako iPhone ichiti Hapana Sevhisi uye chaizvo maitiro ekuigadzirisa. Ndiri kufarira kunzwa kuti ndezvipi zvakagadzirisa dambudziko reNo Service kwauri muchikamu chemashoko pazasi.